TIFF FORMAT နဲ့မှ JPG ကနေပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို - ဖိုင် FORMAT - 2019
အဓိက ဖိုင် Format
TIFF မှ JPG ပြောင်း
Windows7ကို၏အဓိကမှာ display ကိုစနစ်ကဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲအဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်နေရာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ သငျသညျဖိုင်တွေ run ဖို့လိုအပ်စစ်ဆင်ရေး၏သူတို့ရဲ့နိယာမအပေါ်မူတည်ပြီးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာကွဲပြားခြားနားသော directory များတွင်ဖန်တီးသိမ်းဆည်းထားသည်။ (ထိုကဲ့သို့သော application ကိုဦးစားပေးသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းကိုသိမ်းဆည်းထားသောသူတို့ကိုကဲ့သို့) အရေးအပါဆုံးဖိုင်တွေအများဆုံးမကြာခဏသည် directory များတွင်အသုံးပြုသူထံမှဝှက်ထားကို default system ကိုနေရာချနေပါတယ်။
စံကြည့်ရှုဖိုလ်ဒါထဲမှာ Explorer ကိုအသုံးပြုသူအမြင်အာရုံကသူတို့ကိုမမြင်ရဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ၌ပြစ်မှားမိသည်။ သင်ဆဲမှာ Windows setting တွင်ဝှက်ထားသောဒြပ်စင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကသူတို့ရဲ့ display ကိုဖွင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မကြာခဏအသုံးပြုသူများအတွက်မလိုအပ်သောလူကြိုက်အများဆုံးဝှက်ထားသောဖိုင်တွဲ, ဖြစ်ပါတယ် « Appdata »ဘယ်အသုံးပြုသူရဲ့ data တွေကိုအတူ folder ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ စနစ် (နှင့်ပင်အချို့ခရီးဆောင်) သူတို့ရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုစံချိန်သတင်းအချက်အလက်အပေါငျးတို့သ installed အစီအစဉ်များရှိမှတ်တမ်းများ, configuration file များနှင့်အခြားအရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် left နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ Skype ကိုဖိုင်တွေနဲ့အများဆုံး browser များလည်းရှိပါသည်။
သာအဲဒီ settings တွေကိုအတူသင် system ကို configuration ကိုရယူနိုငျသောကွောငျ့အသုံးပြုသူ, စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများရှိရမည်;
ဤအလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ညွှန်ကြားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ အလုပ်၏ရလဒ်မြင်ယောင်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်လမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ, အသုံးပြုသူ folder ထဲမှာချက်ချင်းရွှေ့ဖို့အကြံပြုလိုတယ်:
ကို C: Users username ကို
Method ကို 1: menu ကနေတစ်ဆင့် Activation "Start"
ပြီးတာနဲ့ရှာဖွေရေးထားသောစာပိုဒ်တိုများအတွက်ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၏အောက်ဆုံးမှာ Start ကို button ကို click ရိုက်နှိပ်နေသည် "Show ကိုဝှက်ထားသောဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ".
အဆိုပါစနစ်အားလျင်မြန်စွာရှာဖွေပြီးအသုံးပြုသူတစ်ချိန်ကလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်နိုင်တစ်ခု option ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးနောက် System Setting ထဲမှာဖိုလ်ဒါတင်သွင်းလိမ့်မည်သည့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီပြတင်းပေါက်၌သင်တို့ကိုအောက်ခြေမှာမှ mouse ကိုဘီး scroll နှင့် item တခုကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ် "က Hidden ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ"။ ဒီနရောမှာနှစ်ခုခလုတ်ရှိပါလိမ့်မည် - "ဝှက်ထားသောဖိုင်များ, ဖိုလ်ဒါနှင့် drives တွေကိုမပြပါနဲ့" (ပုံမှန်အားဖြင့်ဤ option ကို enable လုပ်ထားတဲ့) နှင့် "ဝှက်ထားသောဖိုင်များ, ဖိုလ်ဒါနှင့် drives တွေကိုပြရန်"။ ဒါကကျနော်တို့ကထို option ကိုပြောင်းဖို့လိုအပျကနောက်ဆုံးပါပဲ။ ထိုအခါသင်ခေါက်ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Apply"ထိုအခါ « OK ကို».
ပြီးခဲ့သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ပြတင်းပေါက်ပိတ်။ အခုတော့နောက်ကျောကျနော်တို့ညွှန်ကြားချက်များ၏အစဦး၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောပြတင်းပေါက်, ရန်။ ယခုတွင်သင်သည်အထဲမှာယခင်ကဝှက်ထားသောဖိုင်တွဲတစ်ဦးကို double-click လုပ်, ပုံမှန်ဖိုင်တွဲထဲမှာရှိသကဲ့သို့အဝင်မှယခုဖြစ်နိုင်သမျှအရာ« AppData »ရှိကွောငျးကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ယခင်ကဝှက်ထားခဲ့ပစ္စည်းများအားလုံး, Window7စ icon များအဖြစ်ပြသပါလိမ့်မည်။
Method ကို 2: စပယ်ယာကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက် activation
ယခင်နည်းလမ်းနှင့်အတူခြားနားချက်ဖိုင်တွဲ settings ကိုပြတင်းပေါက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Explorer ကို left ထိပ်၌သင် button ကို "အမိန့်" ပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါရပါမည်။
ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးအတွက်, သင်ခလုတ်ကိုတစ်ကြိမ် click နှိပ်ဖို့လိုအပ် "Folder ကိုနဲ့ Search Options ကို"
ဤသူသည်သင်တို့ဒုတိယ tab ကို "View" ကိုသွားချင်တဲ့သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်
ရှေ့ penultimate အပိုဒ်နည်းလမ်းနှင့်အတူတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်လုပ်ရပ်
ဤအ element တွေကိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတဲ့အခါမှာစနစ်ပဲတိုက်ရိုက် access ကိုမှသူတို့ကိုဝှကျထားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့, သတိထားပါ။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကဝေးလံခေါင်သီ applications များသို့မဟုတ် configuration များသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအစီအစဉ်၏တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်း clean up လုပ်ဖို့လိုအပ်ဖော်ပြရန်။ အဆင်ပြေစံကို Windows Explorer ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်မတော်တဆပယ်ဖျက်ရေးအနေဖြင့်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်မှအဘို့, ဝှက်ထားသောဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲ၏ Display ကိုကို turn off ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
ဗီဒီယို Watch: Convert Files with Format Factory (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © ဖိုင် Format 2019